देश परिसर Okunky (मनोरञ्जन केन्द्र)। बाहिरी बाहिरी डुब्यागलिंकी
यात्रा गर्दै, पर्यटकहरूका लागि सुझावहरू
कजाकस्तान हाल नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको लागि धेरै आकर्षक भएको छ। यस गणतन्त्रमा मनोरञ्जनको लागि ठूलो माग एक सस्ती मूल्य र प्राकृतिक आकर्षणको कारण हो। संरक्षित क्षेत्रहरू, चिसो नदिने नदीहरू र अज्ञात झीले फैलिएको क्षेत्र। एक अविस्मरणीय प्रभाव असामान्य ज्यामितीय आकार को चट्टानी चोटहरु द्वारा निर्मित, स्वभाव द्वारा बनाईएको छ।
नगरपालिका र गैरसरकारी पर्यटकहरूको समीक्षा अनुसार, सबैभन्दा योग्य स्थानमध्ये एक ओकेनकी देश परिसर हो। मनोरञ्जन केन्द्र धूल शहरको राजमार्गबाट टाढा एक छेउमा कुनामा स्थित छ। यहाँ तपाईं विदेशी पक्षीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अचम्मलाग्दो जनावरहरू भेट्न, भित्री बोल्डरहरूको प्रशंसा गर्न, परी कथा कथाहरूको सम्झना र धेरैजसो तैर्न सक्नुहुन्छ। सफा हावा, लुम्बिनी परिदृश्यहरू, एक तालाबको विशाल विस्तार, एक प्यासिसिङ वातावरणले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ र हामीलाई विश्वव्यापी समस्याहरू बिर्साउँदछ।
विवरण र मार्ग
पौराणिक झील Dubygalinsky को नजिकै (Mitrofany तालाब), ओस्ट-कमेनगोरस्क शहर देखि 80 किमी ओकेन्की जटिल छ। ग्रीष्म ऋतुमा मनोरञ्जन केन्द्रको एकदम लोकप्रियता छ। लगभग सम्पूर्ण तर्फबाट आगन्तुकहरु संग लगी थियो। यसमा कुनै पनि आश्चर्यजनक कुरा छैन - प्रत्येक व्यक्तिले प्रकृतिमा समानुपातिक, एकाग्रता र आरामको लागि प्रयास गर्दछ। स्थानीय बासिन्दाहरूको अनुसार, धेरै व्यक्तिहरू अरू ठाउँमा फेला परेनन्।
ताल पुग्न सजिलो छ: दुई सडक। पहिलो एक प्रिनोगोर्नोईको गाउँको माध्यमबाट दोस्रो, मेनोनोनो गाउँको माध्यम ले जान्छ। दोस्रो राजमार्गसँगै हिँड्दै, पछि देखि तपाईं दुबैबगलाको पर्वतको उदय देख्नुहुनेछ। खुट्टामा पर्यटकहरूका लागि सानो कटेजहरू छन्। लगभग समान नाम देशको अर्को क्षेत्रमा मौसमी मनोरञ्जन ओकेनके (टमस्क) हो - दिशालाई भ्रमित नगर्नुहोस्।
रात कहाँ बिताउनु हुन्छ?
क्षेत्र को प्रवेश द्वार बाधा संग छ - शुल्क को लागि। आगन्तुकहरू पानीको किनारा नजिकै तम्बू वा आरामदायक कोटिहरूमा समायोजन गर्न सकिन्छ। आरामदायक ओकिनाका मनोरञ्जन केन्द्र आरामदायक जीवन शैली को सुविधा प्रदान गर्दछ। "मानक" वर्ग र वीआईपीको छत सहित विभिन्न कोटीहरूको घर। आन्तरिक डिजाइन - एउटा पेटी, घरको भान्साको साथ आवश्यक फर्नीचर र एक भान्सा क्षेत्र हो।
मनोरञ्जन केन्द्र "ओकेनकी" (अस्ट-कामेनोगोरस्क) डबिगेलिन्स्की पोखरीको रेतीली किनारेको छेउमा अवस्थित छ। पानी यसको संयोजन समुद्र जस्तो छ, यसको अलावा यो रेडोन समावेश छ, यसको औषधि गुणका लागि जानिन्छ। यसकारण, धेरैले स्वास्थ्य प्रक्रियाका साथ सुखद छुट्टै गठबन्धनमा आउँदछ। प्राकृतिक र विविधता मनोरञ्जन सेवाहरु यो स्थान धेरै लोकप्रिय बनाउँछ। किराए मा मोटर नौकाहरु, जल साइकलहरु। किनारामा खेल मैदान हो।
पर्यटकहरूलाई के छ? यो अचम्मलाग्दो छ कि त्यहाँ रक्तचापको कीराहरू छैनन् - मच्छरहरू। यस कारणको लागि, धेरै आरामहरू तीजहरूसँग। बच्चाहरु को लागि Okunky परिसर मा एक आधुनिक खेल को मैदान हो। मनोरञ्जन केन्द्र दुवै युवा यात्रीहरु र वयस्कों को लागि साइकल प्रदान गर्दछ।
स्कीइङको लागि बाटो एकदम राम्रो तरिकाले विकसित भएको छ, बाधाहरू सिर्जना गर्ने ठूला ढुङ्गाहरू सफा गरियो। सवारी वा पैदल यात्राको अवधिमा तपाई वरपरको परिदृश्य अवलोकन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। जाडोमा तपाईं स्कीइङ र स्नोबोर्डिङ जान सक्नुहुन्छ। सना संग एक वास्तविक काठ सौना क्षेत्र मा बनाइएको छ। त्यहाँ एक कैफेटेरिया छ जहाँ तपाईं स्वादिष्ट र राम्रो खाना खाउनुहुनेछ।
यो केवल मित्र र परिवारको साथ समय खर्च गर्न राम्रो छैन, तर कर्पोरेट सभाहरू पनि व्यवस्थित गर्नुहोस्, विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउनुहोस्। निष्क्रिय मनोरञ्जनको लागि त्यहाँ एक बिलियर्ड कोठा हो, बैकगामोनलाई दिइएको छ, ओकिन्की परिसरमा माछा मार्ने अनुमति दिइएको छ। मनोरञ्जन केन्द्र हरेक पर्यटकको लागि उत्कृष्ट स्थान हो। ताल यसको विविध निवासीहरूको लागि प्रसिद्ध छ, जस्तै कार्प, बार्बोट, पर्ची, पाइक। एक शुरुवात पनि खाली बाल्टी संग रहनेछैन। यो यस उद्देश्यका लागि कि नगरपालिका अक्सर सप्ताहांतमा सम्पूर्ण परिवार आउँछन्।
यो परिसरको मुख्य फाईदा एक पारिस्थितिक रूपमा स्वच्छ क्षेत्र हो, प्रकृतिसँगको गोपनीयताको सम्भावना, मनोवैज्ञानिक भावनात्मक अवस्थाको सम्वन्धन हो। मेगोलपोलिस वास्तविकतामा, यो प्रकारको अवकाश विशेष गरी जनसंख्याको विभिन्न ढाँचाको लागि उपयुक्त छ। अर्को शब्दहरूमा, जो कोही शान्त र शान्त प्रेमको सपना देखाउँदछ, रोजगारीको जीवनबाट घर लिन सकिन्छ। यो आरामको नतिजा एक उत्कृष्ट अवस्था स्वास्थ्य र एक राम्रो मूड हुनेछ।
Berdyansk स्पिट: सुविधाहरु को आराम
यूसुफोभ पैलेस सेन्ट सेन्ट पीटर्सबर्ग: ठेगाना, फोटो
तान्जानिया: पर्यटकहरूको समीक्षा, फोटो
रिजर्भ "सेन्ट कन्टैंटिन र एलेना"। बुल्गारिया पर्खिरहेको छ!
स्पेनमा के देख्नुहुन्छ?
कोठा विषालु फूल: नाम र विशेष हेरविचार को सूची
पूर्वी साइबेरिया को देशी पानी। नदी, ताल, पूर्वी साइबेरिया, को विशेष प्रकृति
सम्भव कारण र उपचार: किन दाँतको दुखाइको को स्नायु हटाउन पछि
Isaak Nyuton - विश्व परिवर्तन गर्ने जीवनी र वैज्ञानिक आविष्कारहरू
हाइड्रोलिक हात - यो के हो र यसले कसरी काम गर्छ?
यो युक्रेन गर्न सेना पठाउन सम्भव छ?
पिस्टन रिंग्स को तापीय मंजूरी को जांच कसरि: विशेषज्ञ सल्लाह
एनालग, प्रयोग, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन: कुकुर लागि "Propalin"
मुख्य ठोस वर्गीकरण